डेटिङ साइट कुनै दर्ता संग फोन नम्बर र फोटो!
भन्न गरौं तपाईं एक्लै छन्, तपाईं मिल्यो नरमाइलो चाहन्थे, संगति, प्रेम र स्नेह छ । त्यसपछि तपाईं आश्चर्य हुनेछ. एक मित्र, प्रेमिका, साथी, सहकर्मी लागि मित्रता वा केही बढी? शायद तपाईं को लागि देख रहे भविष्य पत्नी वा पति? वा खोज वयस्क लागि डेटिङ?
लागि रूपमा इन्टरनेट, क्षण मा धेरै तरिकाहरू छन् नयाँ मान्छे भेट्न र प्राप्त. यो विभिन्न च्याट, फोरम, वेबसाइटहरु र अन्य विभिन्न सेवा गर्न समर्पित डेटिङ र संचार । यी को, सबैभन्दा सुविधाजनक र प्रभावकारी छ साइटहरू र सेवाहरू अनलाइन डेटिङ र सम्बन्धित साइटहरु र सन्देश बोर्डहरू डेटिङ बारेमा छ ।
हामी तपाईं ल्याउन मुक्त डेटिङ साइट बिना दर्ता संग फोन नम्बर र फोटो ।
अधिक ठीक, दर्ता वेबसाइट मा को पाठ्यक्रम, तर यो छ अधिक लागि सजिलो व्यवस्थापन को आफ्नो विज्ञापन, र छैन बनाउन अनावश्यक अवरोध प्रयोगकर्ताका लागि. साथै, हामी प्रदान गरेको छ दर्ता संग सामाजिक सेवाहरू छ । कि छ, तपाईं मात्र आवश्यकता गर्न एक बटन थिच्नुहोस् र तपाईं पहिले नै दर्ता छ ।
यो धेरै सरल छ । हामी तपाईं पोस्ट गर्न सक्छन् विज्ञापन बिना दर्ता.
हामी हुनुहुन्न प्रयोगकर्ता जबरजस्ती गर्न कुनै पनि प्रमाणिकरण
पुष्टि आफ्नो डाटा को कुनै पनि तरिका मा पुष्टि प्रकार: मोबाइल संचार (एसएमएस), इमेल (पुष्टि इमेल), आदि, आदि
वास्तवमा हामी भण्डारण छैन र सङ्कलन छैन कुनै पनि डाटा को आफ्नो प्रयोगकर्ता । हामी कोशिश छैनन्, तर पनि प्राप्त गर्न प्रयोगकर्ता डाटा, त्यसपछि तिनीहरूलाई पठाउन विज्ञापन वा अन्य कुनै जानकारी प्रोभोकिंग भ्रमण गर्न संसाधन वा केहि खरीद.
हामी बस चासो छैन!
अर्को शब्दमा, हाम्रो साइट मा दर्ता मात्र गर्न आवश्यक
← बिना दर्ता डेटिङ साइट
मुक्त डेटिङ वेबसाइट →